ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု စိုးရိမ်စာရင်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု စိုးရိမ်စာရင်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံ
ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု စိုးရိမ်စာရင်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံ
Posted by ကိုပါကြီး on Jul 31, 2012 in Copy/Paste | 29 comments
မြန်မာနိုင်ငံထဲ အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အချို့ရှိပေမယ့်
ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုတွေကတော့ ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်နေကျ ဒီ အစီရင်ခံစာမှာ နိုင်ငံအရပ်ရပ်က ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကို ဖော်ပြရာမှာ
မြန်မာနိုင်ငံထဲ အထူးသဖြင့် လူနည်းစု ဘာသာ ၀င်တွေဟာ ပစ်မှတ်ထား ဖိနှိပ်မှုခံရနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြောင်းစုံကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦးက ပြောပြမှာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ် ထားခြင်းမရှိပေမယ့်
ဘာသာယုံကြည် ကိုးကွယ်မှု ဓလေ့စရိုက်တွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လူမှု အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ ဖိနှိပ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့
အခု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ လူများစုနဲ့ ခရစ်ယာန်၊ မွတ်ဆလင် လူနည်းစုတွေအကြား လူမှုနယ်ပယ်အတွင်း တင်းမာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
အချိန် အတန်ကြာကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး တင်းမာမှုတွေကြောင့် ရုတ်တရက် အကြောင်းတရားတွေကနေ အကြမ်းဖက်မှုတွေအထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး Suzan Johnson Cook က မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အတွင်းမှာ ပြောသွားပါတယ်။
“ မြန်မာနိုင်ငံထဲ အချိန်အတော်ကြာကြာကတည်းက တအုံနွေးနွေးနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ တင်းမာမှုတွေကနေ
ပစ်ပယ်ခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။”
အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ လူနည်းစု ဘာသာဝင်တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိသလို လူနည်းစု လူမျိုးတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေ အပေါ်မှာလည်း စည်းမျဉ်း တင်းကြပ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရှိလာပေမဲ့ ဘာသာရေးအရ ထုတ်ဝေမှုတွေကိုတော့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ချုပ်ကိုင်ထား ဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့်တော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ Bible ကျမ်းစာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ Qur’an ကျမ်းစာ ထုတ်ဝေမှုတွေမှာ ကန့်သတ်မှုတွေ ခံနေရတယ် လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
ဒီလို ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ Country of Particular Concern (CPC) အထူး စိုးရိမ်ရတဲ့ နိုင်ငံစာရင်းထဲမှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ထည့်သွင်းထားတယ်လိ်ု့ ဖော်ပြပါတယ်။
အခု အစိုးရသစ် တက်လာပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲတွေ ရှိနေပေမဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အခြေအနေကတော့ ထူးမခြားနားရှိနေဆဲပဲလို့
ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး ဆလိုင်းဘွေလျှမ်းက ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
“တလျှောက်လုံးပေါ့နော်။ အဲဒီ မဆလ ခေတ်ကတည်းက ကျမ်းစာအုပ်တွေကို ချင်းဘာသာနဲ့ သော်လည်းကောင်း ထုတ်ဝေခွင့် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါတင်မကဘူး၊
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ အရေးကြီး အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာပါတဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ့နော်- အဲဒီ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွေကို ဖျက်ဆီး တာ တော်တော်လေး တွေ့ရတယ်။ အစိုးရအသစ်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ်တောင် ပိုင်း၊ မင်းတပ်မှာလည်း ဖျက်တယ်။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မှာလည်း ဖျက်တယ်၊ ပြီးတော့ ချင်းပြည် နယ်မြို့တော် ဟားခါးမှာလည်း ဖျက်ဆီးတာတွေ တွေ့ရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲ အခြားလူနည်းစု ဘာသာဝင်တွေတင် မဟုတ်ပါဘူး။ လူများစု ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေ၊ အယူအဆတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ ဖိနှိပ်မှုတွေ ရှိနေတုန်းပဲလို့ အခု နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ဘာသာရေး အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အထူးသဖြင့်တော့ နိုင်ငံရေးအရ စိုးရိမ်ချက်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်မှာလည်း ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်း
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ပြည်ပ တာဝန်ခံ အရှင်ပညာဇောတကလည်း မိန့်ပါတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး – ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)
သစ်ထူးလွင်ဆိုက်က သတင်းကို အပင်ပန်းခံကူးတင်ပေးတာ တခြားလူတွေဖတ်စေချင်တဲ့ စေတနာကိုတွေ့ရပါတယ်။
၁- ဗွီအိုအေ သတင်းဌာနရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်သဘောထားကို အခုနောက်ပိုင်း လူတွေနားလည်လာတာရယ်
၂- အခုအချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေးဖိနှိပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံတကာမှာ လှည့်ပြောရင်း ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကနေ ဘာသာရေးပြဿနာဖြစ်အောင် ပုံကြီးချဲ့ နေကြတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီစာမျိုးဟာ အခြေအနေ အချိန်အခါနဲ့မညီဘူးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
ပြဿနာတွေသိပ်ကြီးလာရင် ကိုပါကြီးတို့ရဲ့ မိုးပြာသာသနာကို ဖြန့်ချီစရာ နေရာမကျန်ပဲဖြစ်သွားပါဦးမယ်။
ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လက်ရှိအကြပ်အတည်းနဲ့ ရပ်တည်မှု့ကိုလဲ နဲနဲထောက်ထားပါဦးခင်ဗျာ..။
အခုလိုအချိန်မှာ ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကိုရှေ့တန်းတင်နေတာကတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်
ကောင်းကျိုးမရှိ ဆိုးကျိုးသာရှိနိုင် တာမို့ ဆင်ခြင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အာဏာရှင်ခေတ်ကနေလွန်မြောက်လာခါစရှိသေးတဲ့ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီ
လမ်းကိုလျှောက်နိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ ဖရိုဖရဲနိုင်မှုတွေတော့ရှိနေဦးမှာပါ..အသားမကျသေးပါဘူး
ဦးဆောင်ပြုပြင်နေသူတွေက တစ်ရစ်ချင်းစီပြုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့နောက်မှာရှိနေတဲ့ကျနော်တို့တွေဟာ
မလိုလားအပ်တဲ့ (ဘာသာရေး)ပြသာနာတွေ မဖြစ်လာအောင် ဆင်ခြင်တုံ့တရားလေးထာပြီးနေထိုင်သင့်တယ်
ဟုတ်ကဲ့ သစ်ထူးလွင်မှ Link ကို အောက်မှာဖော်ပြပေးပြီး
စိတ်ဝင်စားလို့ ကိုယ်နိုင်သလောက် ဖော်ပြပေးနေခြင်းပါ။
မိုးပြာတာတွေ၊ မိုး နီတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားတာမို့
ကျနော်အား မိုးပြာလို စွပ်စွဲချက်သည် အမှန်တကယ်မိုးပြာတွေရှိနေရင်
ဦးဦးပါလေရာက မိုးပြာအစွဲ အမုန်းသံသရာအကြည့်များနဲ့ ကြည့်တော့ ဘာသာရေးဝေဖန်ရင် မိုးပြာထင် မြင်မြင်ရာသမုတ်တဲ့အဖြစ်ကို ဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုပါကြီးက မိုးပြာလင့်ကို ညွှန်းဘူးတာကတကြောင်း
ကိုပါကြီးကို မိုးပြာအယူရှိသူလို့ ထင်ထားမိပါတယ်။
ကိုပါကြီးလဲ ကျုပ်ကိုအထင်မှားမှာစိုးလို့ နဲနဲပြောပါရစေ…။
ကျုပ်က ဘယ်ဘာသာ ဘယ်အယူဝါဒကိုမှ မမုန်းပါဘူး…။
ကိုယ့်ဘာသာအယူဝါဒကို ထိခိုက်လာရင်သာ လိုအပ်မယ်ထင်ရင် သင့်လျှော်သလို တုန့်ပြန်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျုပ်က ဘယ်ဘာသာဘယ်အယူဝါဒကိုမှ အထင်လဲမသေးပါဘူး….။
ကျုပ် စိတ်ဝင်တစားလေ့လာတဲ့ အယူဝါဒတွေထဲမှာ ဟိန္ဒူ ၊ အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာများအပြင် မိုးပြာလို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ လဲ ပါပါတယ်…။
အော် ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ ပါလေရာရယ် . . .
နင့်မှာလဲ တော်တော် ရယ်စရာကောင်းနေပါလား ဗြဲ လို့တောင် ဗြဲရတော့မလို ဖြစ်နေပြီ :D။
ကိုပါကြီးက မိုးပြာလင့်ညွှန်ဖူးတာနဲ့ မိုးပြာလို့ ရမ်းသန်း၊ ဗြန်း၊ ဂွမ်း စွပ်စွဲရလောက်အောင်ကိုပဲ မိုးပြာအစွဲ စွဲနေတာ နင်ပါကွယ် ;)
မိုးပြာလို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒကို နင်လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဒါ့ကြောင့် နင်အတွေးတွေထဲမှာ မိုးပြာတွေလွှမ်းနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့။
ငါ မှန်းကြည့်တာနော့။ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ဒါ အတည်ပြောတာ
မင်းဘာသာရယ်ချင်လို့ မင်းအိမ်မှာရယ်ရင် အဲဒါ မင်း ကိစ္စ
၀က်ပေခ်ျ့ထဲလာပြီး ငါ့ကို ပျက်ရယ်ပြုရင်တော့ အဲဒါ ငါ့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်စော်ကားတာ ဖြစ်သွားပြီ
အညားဂျီးကျန်တေးရယ် မောတယ် တော်ပီ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုအသင်းက ကိုဘိုကြည်ပြောတာက
ထောင်တွင်းမှာ သံဃာ(၄၅)ပါးလောက်ရှိနေသေးတယ်ဆို ဘဲဗျာ။ဟုတ်ဘူးလား။
ကူးတင်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဂေဇက်မန်ဘာများရဲ့ သဘောထားလေးတွေကို နားမထောင်ခင်မှာ ပထမဆုံး ပို့စ်တင်သူရဲ့ ဒီအပေါ်မှာ အမြင်သဘောထား ဘယ်ဟာကို သဘောတူတယ် ဘယ်ဟာကို သဘောမတူဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားကို အရင်ပြောပြပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တင်ပြီဆိုကတည်းက ယေဘူယျအားဖြင့် ကြိုက်လို့လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ပို့စ်ရေးသူရဲ့ သဘောထားလည်း ရှိရမှာပါ။ ခင်ဗျား ပို့စ်တွေကလည်း အခန့်မသင့်ရင် conflict ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေ အရလည်း သိပ်မသင့်တော်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပို့စ်တင်သူရဲ့ သဘောထားကို အရင်ဆုံး မပြောထားရင် ပြဿနာဖြစ်မှ လောလောဆယ် ဖြစ်တဲ့ Uzin ဆိုသူရဲ့ ကျနော်မသိပါဘူး။ သူများတွေ ပြောတာပါ ဆိုတဲ့ ပြဿနာပေါ်လာပါတယ်။ စဝေဖန်တုန်းကတော့ တကယ့် ထိတ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ ပဌာန်းတရားနဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဝေဖန်တာပါ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားရဲ့ သုံးသပ်ချက် ရပ်တည်ချက်ကို အရင်ပြောပါ။
ဟုတ်ကဲ့ San Hla Gyi ခင်ဗျာ။
နိုင်ငံရှိပြည်သူတွေ ငြိမ်းချမ်းသာယာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့မှာ ဘာသာရေးဟာ အဓိကအခန်းမှာ ပါနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရမယ့် ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာ မငြိမ်းချမ်းနေရတဲ့ အဖြစ်တွေ ဖြစ်ပျက်နေရတာတွေဟာ စဉ်းစားစရာတွေလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ယနေ့ ဘာသာသာသနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ကိုယ်လည်း စိတ်ဝင်စားသလို အများကိုလည်း မျှဝေသိစေလိုတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျား အရင်တုန်းက တင်တဲ့ ဗမာလား မြန်မာလားပို့စ်လိုပဲ ဒီဘာသာရေး ကိစ္စကလည်း လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက အဓိကကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက စနစ်ပါ။ အနည်းအကျဉ်း ပြဿနာလေးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာက မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ အတွက် hot issue မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက ပြဿနာ ရှင်းနိုင်ရင် အဆွယ်အပွားလေးတွေက အလိုလို ရှင်းသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အဓိက ကိုမရှင်းနိုင်ရင် အဆွယ်အပွားတွေကို ကွက်ရှင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဟိုတေလောတုန်းက ဆွေးနွေးသူတယောက် ပြောသွားတဲ့ ဗမာတွေ ဆန့်ကျင်တာ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တခုတည်းပါ။ ရခိုင်က ရွှေဂက်ကိစ္စတော့ မပြောကြဘူး ဆိုသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဓိက စနစ်ရဲ့ ဆိုးပုံကို ပြင်နိုင်ရင် ကျန်တာတွေက ရှင်းနိုင်တာချည်းပဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ လွယ်လို့လားလို့ မေးရင်တော့ ဒီလူလောက မှာလွယ်တဲ့ကိစ္စ သိပ်မရှိပါဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ ဒါပေမယ့် မဖြေရှင်းနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မည်သည့် သဘောထားဖြင့် တင်သည်ကိုနားမလည်ပါ…ရည်ရွယ်ချက်လေး ကောင်းစေချင်ပါသည်…..
ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ယနေ့ဖြစ်နေရတဲ့ ကောင်း/ဆိုးနှစ်တန်းကို ဘက်မခွဲခြားပဲ ဝေဖန်စိစစ်နိုင်ကြစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဖက်ကပဲ အမှန်ဆိုတဲ့ အစွဲတော့ မပါမိအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်။
ကြည့်ရတာ.. နောက်နှစ်အတွက်.. ထိပ်မှာရှိနေဖို့.. အာမခံပါထပ်ရလိုက်သလိုပဲ…
ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ဆိုတဲ့ ဥပဒေဟာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆိုးရွားဆုံး လျော့တိလျောရဲနိုင်တဲ့ ကိစ္စလို့ပြောရမှာပါ။
သံဃာတော်(တစ်ချို့)က ရန်လုပ်။ အုန်းသီးတင်ရင်တင်ပြန်ပြီ…။
အဲဒီတော့….မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘာသာလက်အောက်ကို အတွေးမဲ့(မတွေးသူ)စွာနဲ့
ရောက်နေကြတဲ့…ရှင်၊ လူ၊ ရဟန်း၊ သီလရှင်၊ သာမဏေတွေလည်း အဲဒါတွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ကတော့….မိသားစုထဲမှာတင် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘာသာအဆုံးအမကို ကိုးကွယ်ယုံ ကြည်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါမှ ဒီမိုကရေစီဖြစ်မှာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါမှ….
လူ့အခွင့်အရေးတို့၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်တို့ ဆိုတာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါ။
ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာ လည်းလို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ ဘုရားရှင်လည်း ဒီလိုပဲ…အယူအဆမတူသူတွေနဲ့
အဆိုးဆုံးကလည်း…..ကိုယ်နဲ့မတူ ကိုယ့်ရန်သူဆိုတာမျိုးပါပဲ။ အားလုံး သတိချပ်နိုင်မှ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးတွေမှာအဆင်ပြေစွာ တိုးတက်စည်ပင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကြုံလို့ ခင်ဗျားကိုပါ ကျနော်ပြောလိုက်ပါမယ်။ ကိုယ်နဲ့မတူ ကိုယ့်ရန်သူ လုပ်တာမခံချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း သွားပြီး အများစုကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာကြီးကို သွားပြီး အတွေးအခေါ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် သွားမဝေဖန်ပါနဲ့။ လူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်အသိဆုံးပါပဲ။ နောက်ပြီး ကိုယ်သိတာကိုလည်း မှန်လှပြီ ထင်မနေပါနဲ့။
အင်းကိုစံလှကြီးတင်နေတဲ့(ပိုစ့်)တိုင်းဟာ ဘာသာရေးနဲ့ နွယ်နေတာချည်းပဲနော်။
ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်နေတာလဲတော့သေသေချာချာမသိပေမယ့် ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်တာ
တော့သိပါတယ်။တစ်ခုပြောချင်တာက အခြားသူတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု့ကို မဖျက်ဆီးသင့်ပါဘူးဗျာ။
ခင်ဗျား စာရိုက်တာ မှားတာလား။ အမှတ်မှားတာလား တော့မသိဘူး။ ကျနော်က ဘာသာရေးပို့စ် သိပ်မတင်ပါဘူး။ သမိုင်းအကြောင်း များပါတယ်။ ဝတ္ထုတိုလေးတပုဒ်ရယ် ဖိုက်တင်ပလေးတဲ့ တပုဒ်ရယ်ပါ။ ဘာသာရေးက ဘုရားသမိုင်းလေး တပုဒ်တင်ရင်းနဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ထည့်ပြောတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် သူများဘာသာရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို မပြောပါဘူး။ မြို့ဝန်ဘိုင်ဆပ်နဲ့ မြို့စာရေးမောင်ပိန် အကြောင်းကို ပြောတာလဲ ဘာသာရေးထက် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်ဆိုးပုံကို ဦးတည်ပြောတာပါ။
အခုမြန်မာနိုင်ငံကို ရခိုင်အရေးအခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီး ဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်ပါတယ်၊ မွတ်ဆလင်တွေကိုဖိနှိပ်ပါတယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး ဖိအားပေးဘို့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံ/အဖွဲ့တွေ က လုပ်နေကြတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က ရိုဟင်ဂျာကို ယနေ့တရားဝင်လက်ခံပြီး နောင်တနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေအပိုင်းကြီးကြီးကို ပေးလိုက်ဖို့ပဲ……………
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရပ်တည်မှု့နဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကိုခြိမ်းခြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုအပြင်မီးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်လက်ညှိုးအပြစ်တင်ပြီး မီးလောင်ရာလေပင့်ပေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး………
ဘယ်သူတွေနဲ့ အလိုတူအလိုပါဖြစ်နေသလဲလို့ ထင်ရှားသွားပါတယ်….
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်ရင်
ကျုပ်အထင်ကတော့ ( ထင်ဒါ )
တာလီဘန်းလား ဘာကောာင်တွေလည်း ဒီကောင်တွေက
( ပြောသာပြောတာ တောကြောင်တောင် သိက္ခာကျတယ် )
ဒီကောင်တွေက အခြေနေတစ်ခုမှာ ဝင်လုံးတယ်ဘဲထင်တယ်
ပြောခြင်တာက ဒီကောင်တွေ လှုံ့ဆော်လို့ ဒီအရေးခင်းကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး
ဖြစ်လာတဲ့အခြေနေမှာ ဒီကောင်တွေ လာဟောင်နေတာ
သူတို့ပြောသလို ဟိုမှာ ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေလို လုပ်ကြည့်ပါလား
လွှတ်တော်ထဲက ဂိုဏ်ချုပ်ကြီးက ပြောနေတယ် အကြမ်းဖက်တွေသတိထားဆိုပြီး
အဲဒါ သေချာရဲ့လား ကိုကြောင်ကြီး။ ကျနော်တော့ အဲဒီလို တခါမှ မပြောဖူးနော်။ သူ့ကို စကားအသုံးအနှုန်း ဆင်ခြင်ဖို့ပဲ ပြောဖူးတာပါ။ မယုံရင် ကျနော့်ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။
အင်း ကိုကြောင်ကြီးက သေသေချာချာ ပြောနေတော့လည်း မယုံရအခက်ပဲ။ ဟုတ်များ ဟုတ်နေသလား။
ဓူတင်ကျင့်တဲ့ မူစလင်ဒဲ့ …
(နောက်တာပါ ခင်ဗျာ …)
ဟုတ်တယ်လို့ တမင်ယူဆရတော့မလိုလို ဖြစ်သယောင်ယောင်ထင်မိတယ် ကွိကွိ
ယခု ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်အရေးဟာ ဘာသာရေးကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်
အခြေခံပြိးပေါ်လာတာမဟုတ်ပါ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြိး တရားမဝင်
ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ(ခေါ်)ဘင်ဂါလိ လူမျိုးစု တွေကြောင့် ဖြစ်
ရတဲ့ ပြဿနာပါ။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုနဲ့
ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့လေ့ရှိပါတယ်၊ ဘင်ဂါလိတွေ
သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ ငတ်နေတယ်၊ စားစရာ မရှိဘူး၊ နေစရာမရှိဘူး
ဒိတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲကို ခိုးဝင်လာတယ်၊ အစကတော့
ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲ၊နောက်ပိုင်းတော့ ပြဿနာက ပိုကြိးလာတယ်၊
သူတို့က စိမံကိန်းနဲ့ အကွက်ချ လုပ်ဆောင်လာကြတယ်၊ကလေးတွေ
အများကြိးမွေးတယ် လူဦးရေတိုးပွားအောင် လုပ်တယ်၊လုံလောက်တဲ့
အရေအတွက် ရလာတဲ့အခါ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်တွေ
ကို ရန်ပြု ပြဿနာရှာတယ်၊သူတို့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ရခိုင်ကို
သူတိုတရားဝင် တံခါးမရှိ ဒါးမရှိ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရေးဖြစ်တယ် ခေတ်သစ်
ကိုလိုနယ်လိုက်ဈေးရှင်းပဲ ၊အဲ့သည်ကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြား
ဒေသတွေကို နယ်ချဲ့မယ်၊ ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးစုတစ်စု
ကိုဖန်တိးလိုက်တယ် ၊မြန်မာ့ တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတစ်ခု အနေနဲ့ပေါ့
အစိုးရက လက်မခံတဲ့အခါ လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ပါတယ်၊ ဘာသာရေးခွဲခြား
ပါတယ်ဆိုပြိး တကာဘာလုံးသိအောင် မိဒိယာကတဆင့် ဝါဒဖြန့်တယ်
တိဗွိကင်မရာရှေ့မှာ အလူးအလိမ့်နဲ့ သေပါပြိ သတ်နေကြပါပြိ ဆိုပြိး
ပရိတ်သတ်ရဲ့ မျက်ရည်ကို ရအောင်သရုပ်ဆောင်တယ်၊မူဆလင် တိုင်း
ပြည်တွေရဲ့ အကူအညိကို ရယူပြိး မြန်မာကို ဖိအားပေးတယ်၊ UN ကို
လှည့်ဖြားပြိး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေတယ်၊ မူဆလင်ရဲ့ အဓိကအကြဆုံး
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တကဘာလုံး မူဆလင်တိုင်းပြည် ဖြစ်ဖို့ပဲ။
ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုရာမ်ကျမ်းမှာ အတိအလင်းဖေါ်ပြ ထားပါတယ်၊
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မူဆလင်အယူ
ဝါဒရဲ့ စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်နယ်ချဲ့ခြင်းကို ခံနေရပါတယ်၊ဒါပေမဲ့
အများအမြင်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က လူကြမ်းတွေ၊ဆိုးသွမ်းသူတွေ
ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် ရခိုင်အရေးဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲသာ
သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးမဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာ့တိုင်ရင်းသားအားလုံး၊မြန်မာ
တကဘာလုံး နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ အရေးဆိုတာ အားလုံးသိအောင်၊
ကဘာက သိအောင်ချပြဖို့ တကယ့်ကို လိုအပ်နေပါပြိ။ မြန်မာ့ တိုင်း
ရင်းသားအားလုံးကလည်း အမျိသားရေးအမြင်နဲ့ မဆိုင်သလိုမနေပဲ
စုစုစည်းစည်းနဲ့ ကာကွယ်ရမှာပါ၊ နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုး မပျောက်အောင်